Taliye saldhig booliis oo lagu dhaawacay magaalada Boosaaso - Puntland Mirror Believable Media Website
HomeSomaliaPuntlandTaliye saldhig booliis oo lagu dhaawacay magaalada Boosaaso
Taliye saldhig booliis oo lagu dhaawacay magaalada Boosaaso
February 15, 2020 Puntland Mirror Puntland, Somalia 0
Booliis ku sugan Boosaaso. [Sawir Hore]
Boosaaso-(Puntland Mirror) Sargaal katirsan ciidanka booliiska Puntland ee gobolka Bari ayaa lagu dhaawacay magaalada Boosaaso, sida bog wareedka Puntland Mirror ay u sheegeen ilo-wareedyo haayadaha ammaanka katirsan.
Niman baastooladu ku hubeysan ayaa Cumar Warsame Ciise weerar u geystay xillii uu ka soo baxay masjid salaadi Jimcaha.
Cumar ayaa ah taliyaha ciidanka booliiska saldhiga Janaraal Nuursalaad oo kuyaala gudaha magaalada Boosaaso.
Kooxdii weerarka geysatay ayaa ka baxsaday goobta, ilo-wareedka ayaa intaas ku daray. Masuuliyiinta dowladda weli kama aysan hadlin xaalada taliyaha.
Ma jirto cid sheegatay masuuliyada weerarkaas, balse kooxaha argagixisada ah sida ISIS iyo Al-Shabaab ayaa weeraro kan lamid ah ka fuliyay magaalada Boosaaso, ee xarunta ganacsiga Puntland.
Guddoomiyaha gobolka Mudug ee Puntland oo ku edeeyay DFS in ay qorsheynayso in ay ciidamo geyso gobolka
Guddiga doorashada madaxweynaha Soomaaliya oo sheegay in la badalay xaruntii lagu qaban lahaa doorashada
Muqdisho-(Puntland Mirror) Guddiga doorashada madaxweynaha dowladda federaalka Soomaaliya ayaa sheegay in la badalay xaruntii lagu qaban lahaa doorashada. Guddoomiyaha guddiga doorashada Cabdiraxmaan Ducaale Bayle oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in laga wareejiyay xarunta tababarka [...]
Puntland accuses Somaliland of violating its borders
Galkayo-(Puntland Mirror) Puntland has accused Somaliland of violating its borders in Sanaag and Hayland regions and warned it would face consequences if such violations continue. Speaking at Press conference, Puntland’s minister of security Abdi Hersi [...]
Saaxiibada Soomaaliya oo soo dhaweeyay wada-hadalka u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka
Muqdisho-(Puntland Mirror) Saaxiibada Soomaaliya ayaa soo dhaweeyay wada-hadalka u dhexeeya Dowladda Federaalka Soomaaliya iyo Dowladdaha Xubnaha ka ah Federaalka, sida lagu sheegay war-saxaafadeed soo baxay gelinkii dambe ee Isniinta. “Saaxiibadu waxay ku boorrinayaan Madaxda Soomaaliyeed [...]